Rikoorro dhowr ah oo laga diiwaan geliyay kullamadii Chelsea iyo Arsenal ay guulaha gaareen, iyo qasaaradii Milan. – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Rikoorro dhowr ah oo laga diiwaan geliyay kullamadii Chelsea iyo Arsenal ay guulaha gaareen, iyo qasaaradii Milan.
Jimco, October, 26, 2018(HNN) Waxaa xalay qaaradda Europe laga ciyaaray kullamadii saddexaad ee heerka Group-yada, iyadoo kooxaha reer England ee Arsenal iyo Chelsea ay guulo gaareen kullamadii ay ciyaareen, halka kooxda AC Milan dhegta lagu dhuftay.
Haddaba waxaan idin la wadaageynaa rikoorrada laga diiwaan geliyay saddexdaas kullan
Danny Welbeck waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Arsenal gool ugu dhaliyo iyadoo marti ku ah dalka Portugal kaasoo magaciisa aysan raacin Campell.
Danny Welbeck (2018/19)
Sol Campbell (2009/10)
Kevin Campbell (1991/92).
Arsenal ayaa xalay markii ugu horreysay koox Portugal ah soo garaacday iyadoo booqasho u tagtay, xilli horraan saddex bareejo iyo saddex guuldarro ay uga soo qaadatay halkaas, waxaana guusha ay heleen booqashadoodii toddobaad.
Arsenal waxa ay gaartay 11 guul oo xiriir ah dhammaan tartamada, waxaana sidaan oo kale ugu dambeysay October 2007.
Danny Welbeck waxa uu ka qayb qaatay shan gool, shantii ciyaarood ee uu xilli ciyaareedkan ugu soo billawday Arsenal.
AC Milan waxa ay qaybta hore ee ciyaarta ku guuldarreysatay inay sameyso hal darbo oo bartilmaameed sax ah noqda, waana markii labaad toddobaad gudahiisa ka dib kullankii Inter Milan oo ay tan oo kale qabsatay.
Patrick Cutrone waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee dhashay ka hor 1/1/1996 ee ugu yaraan toddobo gool ka dhaliyo Europa League-ga.
Ruben Loftus-Cheek waxa uu goolkiisa koowaad ku dhaliyay darbadii ugu horreeysay ee bartilmaameed sax ah noqotay xilli ciyaareedkan 2018-19.
Ruben Loftus-Cheek waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee Ingiriis ah kaasoo saddexley ka dhaliyo Europa League, tan iyo Harry Kane saddexleydiisii Tottenham ee uu ka dhaliyay Asteras Tripolis October 2014.
Ruben Loftus-Cheek Waxa uu dhaliyay saddexleydiisii ugu horreysay xirfaddiisa heerka sare.
Ruben Loftus-Cheek waxa uu noqday xiddiggii ugu horreeyay ee Chelsea saddexley ugu dhaliyo tartamada Europe tan iyo Didier Drogba September 2006 waxaana Drogba uu ka dhaliyay Levski Sofia.
Rikoorro dhowr ah oo laga diiwaan geliyay kullamadii Chelsea iyo Arsenal ay guulaha gaareen, iyo qasaaradii Milan. added by admin on 26/10/2018